Faka tahaka tokoa! | NewsMada
Faka tahaka tokoa!
Maro ireo mametraka fanontaniana hoe iza koa ity rangahy manao solomaso kely ity rehefa mahita ny sarin’i Paul Kagame mihantona etsy sy eroa eny an-dalambe. Mahagaga fa na eo aza ny tambajotran-tserasera isan-karazany, vitsy no mahalala ity filohan’i Rwanda ity. Ho vahiny manokana mandritra ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny Fahaleovantena izy. 25 taona lasa izay, rotiky ny adim-poko i Rwanda. Tratry ny vono moka ny foko Tutsis izay vitsy an’isa, saingy nitana ny fitantanana ny raharaham-pirenena, manoloana ny Hutus, maro an’isa. Nahatratra 800 000 ny maty tao anatin’ny enim-bolana fotsiny. Vitan’i Paul Kagame ny tena hoe fampihavanam-pirenena. Misy mpamono olona, ankehitriny tamin’ny antsy solanga sy langilangy miara-monina amin’ireo sisam-paty any an-toerana.
Etsy an-daniny, nitombo fito isan-jato isan-taona ny harin-karena faobe, nandritra ny roapolo taona izao. Ny trosa dia natao hamongorana ny fahantrana tokoa. Ny ady amin’ny kolikoly tsy nijereny tavan’olona na natao resaka valy faty politika. Nataony ho fomba fiaina ny fahadiovana. Efa toy ireny firenena aziatika mandroso be ireny i Rwanda izao. Toy ny tsy aty Afrika raha heverina ny zava-misy rehetra ao aminy.
Aiza isika amin’izany? Ny adilahy politika mivadika fifandrafesana ka tsy mila manangan-tsaina ny sasany satria hono tsy manaiky an- dRajoelina Andry ho filoham-pirenena. Ny fampihavanana dia natao fotsiny ihany hizarana seza. Rehefa vita izay, samy mipetraka aloha. Avy eo resy amin’ny fifidianana ka lasa mpanohitra. I Paul Kagame dia ny vahoaka mihitsy no nangataka azy mbola hitondra na dia efa lany aza ny fotoam-piasany voafaritry ny lalampanorenana.
Eto Madagasikara, ny loto sy ny fako zary efa mpiara-monina amin’ny vahoaka. Ireo mandrora sy mandrehoka eny rehetra eny milanjalanja orona ery. Ny tay sy amany handriaka mandritra ny podium sy ny bal populaire etsy Analakely ary mbola hanamarika ny fetin’ny 26 jona.
Fomba fiteny efa mankadilo sofina ny hoe maka lesona. 59 taona aty aoriana, tsy nisy ny fivoarana. Tsy i Paul Kagame irery no nanova an’i Rwanda fa ny vahoaka mihitsy no efa liam-pivoarana raha toa ka lian-dra taloha. Ny Malagasy tsy te-hahalala izany satria mahantra dia voretra, tsy manara-dalàna, manimba ny fanana iombonana, revo ao anaty tsolotra sy tsindry bokotra… mbola lavitry ny afo ny kitay raha izany fiovan’ny toe-tsaina izany!